China Ski palitao matihanina avo lenta azo itokisana sy azo iainana orinasa sy mpanamboatra | Ruisheng
Ekeo ny Logo an'ny mpanjifa OEM
Material Polyester / Customization, takiana fitaovana
Style Palitao, palitao ny rivotra
Anti-UV, Afaka miaina, MAIMAINA, MAFY
1.Professional coating tsy tantera-drano, firakofana volon'ondry ary fahatsapana malefaka sy ahazoana aina, ary lamba mateza vita amin'ny fibre polyester 2400 dia afaka miantoka ny fihazonana hafanana tsara indrindra.
2.Ny palitao ski tsy tantera-drano dia afaka miasa eo ambany lohan'ny tsindry mihoatra ny 10000 mm. Rehefa any ivelany ianao dia arovy ny vatanao sy mahazo aina amin'ny fotoana rehetra, ary mahatohitra ny orana na ny zavona.
3. poketra mitovy:
1) paosy zippery 2 tanana misy sarony (pasipaoro na fitehirizana karatra).
2) paosy anatiny roa, poketran'ny haino aman-jery tsy miankina iray ary paosy zipper iray.
3) Misy paosy patch amin'ny sandry havia hitahirizana ny firavakao (peratra, kavina, rojo, sns.), Gadget na passer ski alohan'ny handehananao.
4) Misy tariby am-bava amboarana sy fanohanana fitaovana ao anaty palitao.
4. Ny palitao azo entina mandro rano dia mora miatrika ny andro ratsy toa ny zavona, orana na ranomandry. Tena mety amin'ny fanaovana ski ambony, snowboarding, snowboarding, mountaineering, hiking, fitsangatsanganana, ary ny palitao miaraka amin'ny lamba nosakanana dia mety ihany koa amin'ny fanatanjahantena ivelany amin'ny ririnina na fotoana maro samihafa.
Previous: Fitaovana mavesatra vita amin'ny akanjo mafana Pajamas mafana amin'ny akanjo mafana any New 100% Cotton mampientam-po amin'ny lehilahy matory
Manaraka: Lehilahy avo lenta SoftshellJacket ivelany